I-hormone wokuzala, Progesterone Injection, Altrenogest Oral Isixazululo - hormone okuthiwa i Okwesibili
Ibhukwana Vitamin AD umjovo [Incazelo] Lo mkhiqizo yellow ecacile ketshezi kungekho nto enemibala emihle noma ukukhanya oily. [Umsebenzi futhi Sebenzisa] Lo mkhiqizo iqukethe vitamin A ne D. le uvithamini A usebenze njengoba ekuthuthukiseni ukukhula anima
I-hormone izidakamizwa. Lo mkhiqizo ongakwazi ukukukhuthaza izinhlanzi hypophysis ukukhulula GTH; ukuthuthukisa follicle izinhlanzi besifazane ukuba secrete estrogen ozokusiza ukuphuthumisa follicle ukuvuthwa, ukukhiqizwa kwamaqanda futhi kukhiqizwe Corpus luteum; zishukumisa ukukhiqizwa isidoda nokuvuthwa izinhlanzi besilisa. Kuyinto ephezulu ephumelelayo izinhlanzi odinagogue, ukuqinisekisa ngempumelelo kangcono ikakhulukazi sezintaba
Sihlose ukuba phambili inkampani esemazweni amaningi lowo nqampuna umhlabeleli phambili emkhakheni wethu.
Siyophishekela ubuchwepheshe eziphambili kakhulu emhlabeni futhi izigwili professional ukudala eliphezulu kakhulu futhi inkonzo engcono, futhi lokho kusenza idumela kanye share emakethe nge ukuthembeka okuhle futhi ubuqotho kanye izinga esitebeleni.
Ningbo Okwesibili i-hormone Factory esasungulwa 1988. Siye uzibophezele isilwane zizalela umkhakha iminyaka engu-30, futhi sihlanganisa impahla eluhlaza, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, luhlolo, yokuthengisa, kanye nokwesekwa kwekhasimende ndawonye ukuba isikali ibhizinisi elikhulu. Inkampani yethu waklonyeliswa ngokuthi "Zhejiang High-tech umkhakha" futhi Cixi Top 20 amabhizinisi "...